Andian-tsarimihetsika 'Fianjeran'ny tranon'i Usher' miorina amin'ny tantaran'i Edgar Allan Poe tonga any Netflix - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Andian-tsarimihetsika 'Fianjeran'ny tranon'i Usher' miorina amin'ny tantaran'i Edgar Allan Poe tonga any Netflix
Andian-tsarimihetsika 'Fianjeran'ny tranon'i Usher' miorina amin'ny tantaran'i Edgar Allan Poe tonga any Netflix
by Anthony Pernicka Oktobra 6, 2021
by Anthony Pernicka Oktobra 6, 2021 10,220 hevitra
Mitaingina avo amin'ny fahombiazan'ny Lamesa misasakalina, Mike flanagan ary ny ekipa dia manangana ny diany vaovao miaraka amin'ny Netflix goavambe. Ny andiany voafetra vaovao Ny Fahalavoana ny Tranon'i Usher dia andiany iray miorina amin'ny sanganasa isan-karazany nataon'i Edgar Allan Poe.
Ny antsipiriany marina momba izay azontsika antenaina amin'ity andiany ity dia mangina ankehitriny. Fantatsika fa Netflix dia nandidy fizarana 8 amin'ny famokarana Mike Flanagan vaovao.
Mike Flanagan (ankavanana) sy ny mpiara-miombon'antoka Intrepid Sary Trevor Macy (ankavia) dia nanatrika ny fizahana ny andiany Netflix farany an'i Flanagan, Midnight Mass. Sary: Rachel Murray (Getty Images)
Flanagan dia namorona ny andian-tantara ary miasa ho mpanatanteraka mpanatanteraka miaraka amin'i Trevor Macy eo ambanin'ny sora-baventy Intrepid Pictures. Flanagan koa dia hitarika fizarana efatra amin'ilay andiany. Emmy Grinwis sy Michael Fimognari dia hamokatra ihany koa, ary i Fimognari koa dia mitarika fizarana efatra. Intrepid Pictures 'Melinda Nishioka dia hiara-hiasa amin'ny famokarana. - Variety.com
Mety ho fahatongavana iray hafa ity ao anatin'ny andian-dahatsoratra nahomby Flanagan ary Intrepid Pictures no nitondra tany Netflix. Anisan'ireo ankafizin'ny mpankafy teo aloha The Haunting of Hill House, Ny fanorisorenana an'i Bly Manor, ary ilay vao navoaka Lamesa misasakalina.
Isan-karazany notaterina manokana i Intrepid koa dia manomana andiam-panafarana andiany The Midnight Club tantara amin'ny andiany Netflix. Isaky ny olona mahalala ny tetikasa, Ny Fahalavoana ny Tranon'i Usher dia andiany mitokana ary tsy hanana fifandraisana amin'ny andiany Intrepid teo aloha. - Variety.com